Underwater Malta: Yekutanga Virtual Museum muMediterranean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Underwater Malta: Yekutanga Virtual Museum muMediterranean
Kuputsa Kufamba Nhau • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
LR - Beaufighter; Pfuti dzeRicasoli; mifananidzo yese iratidzwe neUniversity yeMalta / Underwater Malta
Malta ichangotanga Iyo Virtual Museum - Pasi pemvura Malta, yekutanga yerudzi rwayo muMediterranean. Makore matatu mukugadzira, iyi Virtual Museum inzira nyowani uye itsva yevaoni kuwana nzvimbo dziri pasi pemvura dzekuchera matongo muMalta. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti vanhu vaone panoramic pasi pemvura maonero ayo anowanzo kungoonekwa nekudonha kudzika mukati meMediterranean. Malta yakatoverengerwa seimwe yenzvimbo dzepasi rose dzekudonha, uye zvinotarisirwa kuti iyi Virtual Underwater Museum inokwezva vamwe vakasiyana siyana kuMalta.
Iyo Underwater Malta chirongwa, iine nzvimbo gumi kutanga, iri mukubatana neMalta Tourism Authority (MTA), iyo University yeMalta, uye Heritage Malta. Iyo Virtual Museum - Underwater Malta inoshandisa 10-D mamodheru, vhidhiyo yeVR, uye kutora mafoto, mhedzisiro yemakore mashanu kuunganidza mifananidzo nedata izvo zvinobvumidza vateereri kuti vawane ruzivo rwakazara rwekutsvaga pasi pemvura.
Kudzika kwenzvimbo kunoenderana kubva pamamita maviri (approx. 2 tsoka) kusvika 7m. (approx. 110 tsoka) Kunyange hazvo kuvhurwa kwekutanga kuchiratidza nzvimbo gumi, zvinotarisirwa kuti imwe gumi ichawedzerwa kupera kwa361 uye kunyangwe muna 10. Nzvimbo gumi dzazvino dzinoongorora kupunzika kwechikepe, kupunzika kwendege, ngarava dzepasi pemvura, uye mamwe masosi ari kubva kumahombekombe eMalta. Masayiti akaratidzwa anosanganisira B10 Liberator, JU2020, Phoenician Shipwreck, HMS Stubborn, Victorian Pfuti, Xlighter 2021, Beaufighter, Schnellboot S-10, Fairey Swordfish, uye HMS Maori.
Muzvinafundo Tim Gambin, wepaUniversity of Malta, akataura kuti “pfungwa yeMuseum inoonesa kukosha kwenhaka yeMalta inogona kungowanikwa pasi pemvura. Zvatinoona nhasi ingori chidimbu cheiyo iceberg. Kwakave nekutsvagisa kwakanyanya kwakaitwa kuseri kwechirongwa ichi vachishandisa midhiya nehunyanzvi zvakasiyana kufumura nzvimbo gumi online manje. "
Malta Tourism Authority CEO Gavin Gulia akataura kuti "ichi chiitiko chekutanga, kwete cheMalta chete, asi nedunhu rese reMediterranean. "Virtual Museum iyi ichawedzerawo kushanya kwedu kwekudonha." Gulia akacherekedza kuti mu2019 paive nevashanyi vanopfuura zviuru zana vaishanyira Malta avo vakatora chikamu mune zvekudonha. "Ichi chirongwa cheMalta Underwater chichaitawo kuti nhaka yemagariro yeMalta isvike kune vese vashanyi, kwete avo vakasiyana," akawedzera Gulia.
Matanho Ekuchengetedza eVashanyi
Malta yakaburitsa bhurocha repamhepo, Malta, Zuva uye Yakachengeteka, iyo inoratidza matanho ese ekuchengetedza uye maitiro akaiswa nehurumende yeMalta kune ese mahotera, mabhawa, maresitorendi, makirabhu, mahombekombe zvinoenderana nekuregedzana kwenzanga uye kuyedzwa.
Zvitsuwa zvine zuva reMalta, pakati peGungwa reMediterranean, zvine musha wakasarudzika wenhaka yakasimba, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta yakavakwa neanodada Knights yeSt.John ndeimwe yenzvimbo dzeUNESCO uye yaive European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara emadziro ekuvaka matombo pasi, kune imwe yeBritish Empire anotyisa masisitimu ekudzivirira, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wezvivakwa zvemumba, zvechitendero uye zvemauto kubva munguva dzekare, medieval uye kutanga kwazvino nguva Nemamiriro ekunze ane zuva rinotyisa, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira uye makore zviuru mazana manomwe zvemazana enhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Malta, shanya www.chandiramani.com
Dzimwe nhau nezve Malta.